Hambalyo iyo Hubsasho. Deyn kale miyaa la cafiyay? Prof.yaxye caamir – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Hambalyo iyo Hubsasho. Deyn kale miyaa la cafiyay? Prof.yaxye caamir
Hambalyo iyo Hubsasho. Deyn kale miyaa la cafiyay? Prof.yaxye caamir
Previous articleDaawo:Wadad sheegey inuu helay Dawada Corana vuris oo shaaciyey
Next articleXildh.ahmed fiqi Warka NISA ma hanjabaad looga hortagayo barnaamijyadaGalka baadhista